TAT Partners with Visa Myanmar to Promote Tourism, Digital Payments | Myanmar Business Today
Home Business Local TAT Partners with Visa Myanmar to Promote Tourism, Digital Payments
The Tourism Authority of Thailand (TAT) is partnering with Visa Myanmar to promote tourism between the two countries under the “B500 for You” campaign, which ends in December.
Aimed at promoting awareness of the security and ease of digital payments and acceptance of Visa, the campaign encourages more Myanmar tourists to use digital payments when traveling to Thailand.
“Visa is thrilled to be working in partnership with TAT to offer this promotion to Myanmar travelers and leverage this platform to promote Visa’s breadth of acceptance, security and the convenience of digital payments,” said Lillian Wang, Country Manager of Visa Myanmar.
“We hope to leverage the partnership to bring more international tourists into Myanmar,” Ms. Wang added. “We believe tourism providesagateway to economic progress by helping to stimulate consumption, promote job creation and accelerate infrastructure development. Together with increased adoption of reliable and secure digital payments, every traveler who usesacard to pay or buy goods and services is exponentially contributing to this growth.”
According to Visa’s Global Travel Intentions Study, which examines international travel trends and behavior of 17,500 global travelers from 27 countries around the world, cash is the most preferred payment method for global travelers (52 percent) when making purchases at their destination. Cards, including credit, international debit, charge and prepaid, are the second most preferred method (39 percent), followed by digital wallets (9 percent).
“Tourism is one of Thailand’s key growth engines for economic growth, development and cultural understanding. By working with one of the world’s leading brands, this will bring substantial opportunities to both countries,” said Kulpramote Wannalert, director of the TAT’s ASEAN, South Asia & South Pacific Market Division.
Thailand is one of the most popular international destinations for Myanmar travelers. Other top destinations include Indonesia, China, Singapore and South Korea.
ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် Visa မြန်မာတို့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ခရီးသွားလာမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ အကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက်လာစေမည့် “฿500 for You” ကမ်ပိန်းတစ်ရပ်အတွက် ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (TAT) နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသည့် Visa တို့ကမိတ်ဖက်များအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်သူများအနေဖြင့် ခရီးသွားလာရင်းဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေးပေးချေမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည့် ကမ်ပိန်းမျိုးပြုလုပ် ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများ၏ လုံခြုံမှု၊ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမှုနှင့် Visa ၏ လက်ခံ သုံးစွဲမှုများကို မြှင့်တင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားသည်။
“ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီလိုမျိုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို အခြားနိုင်ငံတွေက ခရီးသွားတွေ ပိုမိုဝင်ရောက် လာစေဖို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုတွေ မြှင့်တင်ပေးဖို့၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးမှုတွေ မြှင့်တင်ပေးဖို့၊ အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးဖို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် ခရီးသွားကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် Gateway တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု Visa Myanmar ၏ Country Manager ဖြစ်သူ Lillian Wang က ပြောသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံမှ ခရီးသွားပေါင်း တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်၏ နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှု အလေ့အထများကို ဆန်းစစ်ထားသော Visa ၏ ဆန်းစစ်ချက် (Global Travel Intentions Study) အရ (၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသော) ခရီးသွားများအတွက် ခရီးသွားလာရင်းဖြင့် ဈေးဝယ်သောအခါ ငွေသားသည် အကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အကြွေး ဝယ်ကတ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေပေးသွင်းအသုံးပြုကတ်၊ ငွေဖြည့်သွင်းအသုံးပြုကတ်၊ ကြိုတင်ငွေထည့် အသုံးပြုကတ်များသည် ဒုတိယအကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း (၃၉ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဂျစ်တယ် Wallet နည်းလမ်းသည် တတိယအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၉ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု ဖော်ပြထားရာ ခရီးသွားရင်းငွေပေးချေကတ်သုံးစွဲမှှု မြင့်တက်လာစေမည့် သဘောလည်း ကမ်ပိန်းကရည်ရွယ်သည်။
“ခရီးသွားကဏ္ဍဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားတိုးရေးတက်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို နားလည်လာစေဖို့ အတွက် အဓိကကျတဲ့မောင်းနှင်အားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုနဲ့ ပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အခွင့်အလမ်း ကောင်းတွေ ရရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အာဆီယံ၊ တောင်အာရှနှင့် တောင်ပစိဖိတ်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ Mr. Kulpramote Wannalert က ဆိုသည်။
များပြားလာသည့်ခရီးသွားအစီအစဉ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်လွယ်လွယ်ကူကူရလာနိုင်ခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးသွားသူများ၏ စိတ်ကိုနှိုးဆွနေပြီး အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာအများစု သွားရောက်ကြသည့် ပြည်ပနိုင်ငံများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်သည်။
Tin Mg Oo
Previous articleSlovenia Passes Law Requiring Central Bank to Cover Losses From 2013 Banking Overhaul
Next articleApple, Intel File Antitrust Case Against Softbank-Owned Firm Over Patent Practices